Paste | The World of Pinkgold
The History Of an Uniform
Posted on February 12, 2008 by cuttiepinkgold
၀တ်ရုံတစ်ခုကို ၀တ်လိုက်တယ်…အဲဒီ့မှာ ဘ၀တွေ စပြီး ပြောင်းလဲသွားခဲ့တယ်….!
ဘယ်လို ၀တ်ရုံမျိုးလဲ သူတို့ဝတ်ဆင်လိုက်တာလဲ…?? သေသေချာချာတော့ မသိပေမယ့် အဲ့ဒီ့ဝတ်ရုံက သူတို့ဘ၀ကို အသေအချာကြီးကို ပြောင်းလဲစေခဲ့တာတော့ အမှန်ပဲ…။ အဲဒီ့ဝတ်ရုံထဲမှာ မင်းသားယောင် ဆောင်ထားတဲ့ ဘီလူးတစ်ကောင်ရဲ့ မျက်နှာဖုံးပါတယ်…သိုးရေခြုံထားတဲ့ ၀ံပုလွေ တစ်ကောင်ပါ တယ်…ပြည်စောင့်နတ် ဟန်ဆောင်ထားတဲ့ မာရ်နတ်တစ်ထောင် ပါတယ်..။
အဲ့ဒီဝတ်ရုံက လူတစ်ယောက်ရဲ့ အနာဂတ်ကို ဇောက်ထိုးမိုးမျှော် ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်ရုံတင်မကဘူး အဲဒီ့လူတစ်ယောက်ရဲ့ အတိတ်ကိုလည်း ကောင်းကောင်းကြီးကို ဖုန်းအုပ်ပြစ်လိုက်နိုင်တယ်…။ဘယ် လိုဝတ်ရုံမျိုးလဲ ငါ့တို့ဘ၀တွေရဲ့ လှပခဲ့တဲ့ အတိတ်တွေကို သွေးစိမ်းရှင်ရှင် အနာဂတ်တွေနဲ့လဲခဲ့တာ?
ဒီဝတ်ရုံက ဘယ်ဘ၀ရဲ့ ဆုတောင်းတွေ ကောင်းခဲ့လို့လဲတော့မသိဘူး…။ အသံကြား ကျိန်ဆဲခံရပါစေ၊ ရုပ်မြင် စောင့်ကန်ခံရပါစေ ဆိုတဲ့ဆုတောင်းတွေနဲ့ အရမ်းပြည့်တယ်…။ နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ် ဒီဝတ်ရုံရဲ့ ထူးခြားချက်က…။ ဒီဝတ်ရုံကို ၀တ်လိုက်တဲ့သူတိုင်း အဖြူ၊ အမဲ မခွဲခြားခံရတော့ဘဲ တံတွေး ခွက်ထဲ ပက်လက်ကလေး မြောခွင့်ရခြင်းဘဲ..။လူမပြောနဲ့ ခွေးတောင်ဒီဝတ်ရုံကို မြင်ရင်ဟောင်တယ်။
ဒီဝတ်ရုံကို ၀တ်ထားရင် အကုသိုလ်ကို အခမဲ့ဝယ်လို့ရတယ်။ ငရဲပြည်ကို VISA မပါဘဲ အချိန်မရွေး သွားလို့ရတယ်(ပြန်လာလို့တော့မရဘူးနော်…မေ့နေမှာစိုးလို့)။ လူပေါင်းများစွာရဲ့ မျက်ရည်တွေကို မိုးတွေ တ၀ုန်းဝုန်းရွာရွာသွန်းသလို ရွာကျအောင် လုပ်လို့ ရတယ်။အသိပညာ အတတ်ပညာရဲ့ အဖူးအပွင့်တွေကို လောင်တိုက်သွင်းပြီး ပြာချခွင့်ရှိတယ်။ကုန်ကုန်ပြောရရင် ငါးပါးသီလကို တရားဝင် ချိုးဖောက်ခွင့်ရှိတယ်။ ကောင်းလိုက်တဲ့ ၀တ်ရုံ…! လိုချင်ရင်ပြော အပိုတွေအများကြီးရှိသေးတယ်..။
အရင်ကတော့ဒီလိုဝတ်ရုံမျိုးကို လူတွေဈေးကြီးပေးဝယ်ပြီး အရမ်းတန်ဖိုးထားခဲ့ကြဖူးတယ် ပြောတယ်။ ဟုတ်တော့လည်း ဟုတ်လောက်ပါတယ်။ ဒီဝတ်ရုံ ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ သမိုင်းကလည်း သိပ်ကိုကြီးမြတ် ခဲ့တာကိုး..။ အခုတော့လည်း ပုံပြင်တစ်ပုဒ်လိုပါဘဲ။ ဒီဝတ်ရုံကြီးကို ယက်လုပ်ခဲ့တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသာ မြင် ရင် သူများတောင် သတ်စရာလိုလိုက်မှာ မဟုတ်ဘူး..။ အခုဆို ဒီဝတ်ရုံမှာ သွေးတွေစွန်းကုန်ပြီ..။ စွန်းနေတဲ့သွေးတွေကို ဘယ်လိုဆေးကြမလဲ?? ၀မ်းနည်းဖို့ကောင်းတယ်.. သမိုင်းတွေ ခြစားကုန်ပြီ။
ယုံကြပါဗျာ..။ ဒီဝတ်ရုံက အရမ်းကို တန်ဖိုးရှိခဲ့တာပါ..။ အခုချိန်မှာ လည်းတန်ဖိုးရှိနေပါသေးတယ်..။ အနာဂတ်အတွက်လည်း တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်လောက်အောင် မရှိမဖြစ် အရမ်းလိုအပ်တဲ့ ၀တ်ရုံတစ်ခုပါ..။ ရှင်တို့ ယုံမယ်ဆိုရင် ပြောပြပါရစေ..။ ဒီဝတ်ရုံထဲမှာ သူရဲကောင်းတွေရဲ့ ၀ိဥာဉ်တွေ ကိန်းအောင်းနေ ကြပါသေးတယ်..။ ဒီဝတ်ရုံဟာ သူရဲကောင်းတစ်ယောက်ရဲ့ အမြင့်မြတ်ဆုံး သင်္ကေတပါ။ ဒီဝတ်ရုံဟာ သူရဲကောင်းတစ်ယောက်ရဲ့ အလှပဆုံး အိပ်မက်တစ်ခုပါ။ အနာဂတ်ရဲ့ သူရဲကောင်းတိုင်း ခုံမင်စွာတပ်မက်တဲ့ မျှော်လင့်ချက်တစ်ခုပါ..။ အသုံးပြုတဲ့ သူတွေအပေါ်မူတည်နေလို့သာ တန်ဖိုးတွေ ကျဆင်းနေတာပါ..။
အခုအချိန်မှာ ဒီဝတ်ရုံရဲ့ တန်ဖိုးကို ပြန်လည်မြှင့်တင်ဖို့ လိုအပ်နေပါပြီ..။ ဒီဝတ်ရုံအပေါ် ယုံကြည်စိတ် ချမှုတွေ..၊အားကိုး တန်ဖိုးထားမှုတွေ ပြန်လည်မြင့်မားလာအောင် ကြိုးစားကြဖို့ အချိန်ရောက်ပါပြီ…။ စွန်းထင်းခဲ့တဲ့ အတိတ်ဆိုး၊ အရိပ်ဆိုးတွေကို လက်တွေ့ကျတဲ့ ကြိုးစားမှုတွေ၊ လုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ ကျရာနေရာကနေ သက်သေပြကြဖို့လိုအပ်နေပါပြီ…။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်တော့ ဒီဝတ်ရုံရဲ့တန်ဖိုးဟာ အခုအတိုင်းပဲ ရေစုန်မှာ ဆက်မြောနေပါလိမ့်အုန်းမယ်..။
အမှန်တရားနဲ့ သစာတရားကို သူတော်ကောင်းတွေ ချီးကျူးဂုဏ်ယူ ကြပါလိမ့်မယ်။ စောင့်ရှောက်ကြ ပါလိမ့်မယ်..။ အမှန်တရားကို ရဲရဲရင့်ရင့်လက်ခံပါ..။ ခိုအောင်းနေတဲ့ သူရဲကောင်းတွေရဲ့ ၀ိဥာဉ်တွေကို သစာစောင့်သိပါ..။ ဒီဝတ်ရုံကို ယက်လုပ်ခဲ့သူရဲ့ အဓိကရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ဦးတည်ချက်ကို အမြဲနှလုံး သွင်းပါ..။ ဒီလိုဆိုရင် ဒီဝတ်ရုံရဲ့ တန်ဖိုးနဲ့ အရေးပါမှုကို ပြန်လည်ပြီး လက်ခံနားလည် လာကြပါလိမ့် မယ်။ ခံယူချက်ရှိရှိနဲ့ ရှေ့ကိုဆက်ရှောက်ပါ..။ နောင်တရစရာမလိုပါဘူး..။
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဒီဝတ်ရုံဟာ လောက၏ မြင့်မြတ်သော၊စွန့်လွှတ် အနစ်နာခံနိုင်ဆုံးသော သူရဲကောင်းများသာ ၀တ်ဆင်ခဲ့ကြတဲ့၊၀တ်ဆင်နိုင်စွမ်း ရှိတဲ့ တစ်ခုတည်းသော ၀တ်ရုံတစ်ခု ဖြစ်သော ကြောင့် တန်ဖိုးထားသင့်ပါကြောင်း…….။ ။
မှတ်ချက်။ ။ ဒီဝတ်ရုံအား စတင်ယက်လုပ်ခဲ့သော ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ မွေးနေ့အား ဒီ Post ဖြင့် ဂုဏ်ပြုအပ်ပါသည်။
မူရင်းပို့စ်ကို ရေးသားသူမှာ Blackdream21 ဖြစ်ပါတယ်။
Filed under Copy, Paste |	1 Comment
Inland Bloggers, Exciled Media and Current Conditions
Posted on February 7, 2008 by cuttiepinkgold
ကျွန်တော်တို့ အခုတလော ဘာမှ မဖြစ်သလိုသာ နေ နေကြတာပါ။ ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာကို အားလုံးသိကြမှာပါ။ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ သဘောထားကိုပြောဖို့ အများကြီး စဉ်းစားခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဖွသလို ဖြစ်မှာစိုးလို့ မပြောခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ပြောဖို့ လိုမယ်ထင်လို့ ပြောပါရစေ။
ပထမဆုံး ပြောချင်တာကတော့ ပြည်တွင်း ဘလော့ဂါတွေပါ။ ဘလော့ဂါတွေ ဘာကြောင့် ဘလော့ဂ်ရေးကြသလဲဆိုတာ တစ်ယောက်နဲ့ လွတ်လပ်စွာ အမြင် ကွဲလွဲနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့နိုင်ငံရေးတို့၊ ကျွန်မကတော့ လူမှုရေးတို့၊ ကျုပ်တို့ကနည်းပညာအကြောင်းတို့၊ ငါကတော့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာတို့ ကြိုက်သလိုသာပြောပါ။ ပြောလို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သေချာတာကတော့ ကိုယ်ရေးချင်တာကို ကိုယ်ရေးတာပါ။ ဘယ်သူရဲ့ လွှမ်းမိုးမှု၊ လောင်းရိပ်ကိုမှ မခံချင်လို့ လွတ်လပ်တဲ့ ဘလော့ဂ်ကို ရေးနေကြတာပါ။
ဘလော့ဂ်နဲ့ ပတ်သတ်လို့ကတော့ ဘယ်သူ ဘာပြောပြော ကျွန်တော်လည်း ကျွန်တော်ရေးချင်တာကို ရေးတာပါ။ ပြည်တွင်းဘလော့ဂါတွေမှာ နိုင်ငံရေးရယ်လို့ ပီပီပြင်ပြင် ရေးနေတဲ့သူ ကျွန်တော်လည်း မတွေ့မိပါဘူး။ အမှန်အတိုင်း ပြောရရင်တော့ အပြင်မှာတော့ ပြောချင်ပြောကြမှာပေါ့။ ဒါကတော့ လဘက်ရည်ဆိုင်ထိုင်ရင်းလည်း ပြောနေကြတာပဲဆိုတော့ မထူးဆန်းပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ငါတို့ ဘလော့ဂါတွေကို ဒီလို လုပ်လိုက်ရင် ဒီလို လုပ်ကြမယ်ဆိုတာ ဘယ်သူတွေဆီက ဘယ်လို လာတဲ့ စကားလဲဆိုတာ မေးခွန်း အများကြီး ထုတ်ဖို့ရှိပါတယ်။ အခု ပြည်ပမီဒီယာတွေမှာ ဘလော့ဂါတွေက ပြောသလိုလိုနဲ့ တက်နေတဲ့ သတင်းတွေကို ပြောစရာရှိပါတယ်။ ကိုနေဘုန်းလတ်ကို ဘလော့ဂ်လုပ်လို့ အဖမ်းခံရသလို ပြောနေကြပါတယ်။ ဘာလို့ နိုင်ငံရေးနဲ့ဘလော့ဂ်ကို အတင်းရောထွေးအောင် လုပ်နေရတာလဲ။
ပြည်ပ မီဒီယာတွေကို အမှန်အတိုင်းပြောရရင် ကျွန်တော် အပါအ၀င် လူအတော်များများက မရမက ၀င်ဖတ်ကြပြီး သတင်းတွေ ဖတ်ကြပါတယ်။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် မိုးလုံးပြည့်မုသာဝါဒီဆိုတာကို မနေ့တနေ့က အထိ ဟာသလို သဘောထားခဲ့တာပါ။ ဒါပေမယ့် အခုအချိန်မှာ ကျွန်တော် ဘယ်မီဒီယာကို အပြည့်အ၀ ယုံကြည်ပါသလဲဆိုရင် ဘယ်မီဒီယာကိုမှ မယုံကြည်ပါဘူး။ ယုံကြည်လောက်စရာ၊ စိတ်ချလောက်စရာ မီဒီယာကို ဘယ်မှာမှ မတွေ့နိုင်ပါဘူး။ ကျွန်တော်ဆိုလိုတာက ပြည်တွင်း ပြည်ပ အားလုံးကို ဆိုလိုတာပါ။ ဘယ်သူ ဘယ်ဝါ ပြောစရာ မလိုလောက်အောင်ကို အားလုံးလိုလိုဟာ ၀ါဒမှိုင်းတွေ တိုက်နေကြတာပါ။ လောလောဆယ် သတင်း မီဒီယာနဲ့ မပတ်သတ်ပဲ အရင်တစ်ချိန်တုန်းက ပတ်သတ်ခဲ့ဘူးတဲ့သူတွေက အစ သတင်းတစ်ခုကို သတင်းအတိုင်းမဟုတ်ပဲ ကိုယ်တစ်ယောက်တည်း ဒါမှမဟုတ် ကိုယ့်ကို ထောက်ပံ့သူတွေရဲ့ ဖြစ်စေချင်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကို အထောက်အကူဖြစ်အောင် ရေးနေကြတာ အထင်အရှားပါ။
ကိုနေဘုန်းလတ်ဟာ ဘာအကြောင်းနဲ့ အထိန်းသိမ်းခံထားရတယ်ဆိုတာ ဘယ်သူမှ အတိအကျ မသိသေးခင်မှာ ဘလော့ဂ်ကြောင့်လို့ ဘာကြောင့် စွပ်စွဲနေကြတာလဲ။ ပြည်တွင်းက ဘလော့ဂါတွေကို အနေအစားကျပ်အောင် လုပ်နေကြတာလား။ ပြည်တွင်းဘလော့ဂါတွေ အသစ်အသစ် ထွက်မလာရဲအောင် လုပ်နေကြတာလား။ ရှိပြီးသား ဘလော့ဂါတွေ ဆက်မလုပ်ရဲအောင် လုပ်နေတာလား။ အကြောင်းအရာတွေကို ရောထွေးသွားအောင် မလုပ်ကြပါနဲ့။ ခင်ဗျားတို့လို ဟိုအဝေးကနေ ဘေးတီးနေတဲ့သူတွေကြောင့် ဘာအကြောင်းမှ ထူးပြီး ကောင်းလာစရာမရှိဘူး။ အကျိုးယုတ်ဖို့ပဲ ရှိတယ်။
တစ်ယောက်တစ်ပေါက် ၀ိုင်းပြောလို့ အထဲကလူ ပိုဆိုးသွားရင် ၊ အပြင်ကလူတွေ ထပ်ပြီး ဒုက္ခများသွားရင် ခင်ဗျားတို့ ပယောဂ ကင်းတယ်လို့ မထင်နဲ့။ အဲဒီလောက်မှ မစဉ်းစားတတ်ရင် ဒီအလုပ်တွေကို ဆက်မလုပ်နဲ့။ ကိုယ်လုပ်တဲ့ အလုပ်က တစ်ဘက်သားကို စေတနာနဲ့ ကောင်းစေချင်တာလား။ အပြစ်လွတ်လား။ ကိုယ်နာမည်ကြီးဖို့ပဲလား။ သေချာစဉ်းစား။
လက်ရှိအခြေအနေမှာ ပြည်တွင်းက အချို့ဘလော့ဂါတွေ ဘယ်သူတွေရဲ့ မှိုင်းမိနေသလဲ။
လက်ရှိအခြေအနေမှာ ပြည်ပက အချို့သောမီဒီယာတွေ ဘယ်လမ်းကြောင်းကို မောင်းသွင်းနေသလဲ။
လက်ရှိအခြေအနေမှာ ဘာလုပ်သင့်သလဲ။ ဒါမှမဟုတ် ဘာမလုပ်သင့်ဘူးလဲ။
ပြည်ပမီဒီယာတွေကတော့ အော်နေဦးမှာပဲ။ ဟုတ်တယ်မို့လား။ ခင်ဗျားတို့လည်း ဖတ်ရင်းသေချာ စဉ်းစား။ ခင်ဗျားတို့ ထမင်းတစ်လုပ်စားရဖို့အရေး ဘလော့ဂ်တွေ၊ ဘလော့ဂါတွေကို လာပြီး အသုံးမချနဲ့။ လက်ရှိတွေကလည်း ဘလော့ဂ်ကို အသုံးချ၊ အတိုက်အခံတွေကလည်း ဘလော့ဂ်ကို အသုံးချနဲ့ ဘလော့ဂ်တွေလည်း စစ်မြေပြင်လုံးလုံးဖြစ်နေပြီ။ နောက်ဆုံးတော့ ဘယ်သူမှ အယုံအကြည်ခံရလိမ့်မယ် မထင်နဲ့။ ဘယ်ဘက်ကိုမှ လေးစားစရာ မမြင်တော့ဘူး။
လက်ရှိအချိန်မှာ ဘယ်သူ ကောင်းသလဲ၊ မကောင်းဘူးလဲဆိုတာ ပြောစရာ မလိုလောက်အောင်ကို ရှင်းပြီးသားပါ။ ဘယ်သူတွေ ဘယ်လောက်ထိ အောက်တန်းကျ မိုက်ရိုင်းတယ်ဆိုတာ တစ်ကမ္ဘာလုံး သိပြီးသားပါ။ အဲဒါကို ခင်ဗျားတို့ ကျုပ်တို့က ပါးပါးနပ်နပ်မရှိပဲ ကလေးအတွေးတွေနဲ့ လုပ်တဲ့သူကလုပ်၊ ငါတို့အတွက် ခွင်ဝင်ပဟဲ့ဆိုပြီး ဖွတဲ့သူက ဖွ လုပ်နေလို့ကတော့ ခင်ဗျားတို့ ကျုပ်တို့ ဖြစ်ချင်တာတွေ၊ ဖြစ်သင့်တာလို့ ထင်တာတွေနဲ့ အဝေးကြီး ဝေးနေဦးမှာပဲ။
ကြိုပြောထားရရင် ကျွန်တော့်ကို ဘယ်သူ့ဘက်က ဘယ်ဝါ့ဘက်က လာမပြောနဲ့။ ဘယ်ဘက်ကမှ မဟုတ်ဘူး။ ကျွန်တော်သည် ကျွန်တော် မှန်တယ်ထင်တဲ့ဘက်ကနေမှာပဲ။ ဘယ်သူ့ လောင်းရိပ်အောက်မှာမှ နေမှာ မဟုတ်ဘူး။ ဘယ်အဖွဲ့အစည်းကိုမှ အမှန်ဆုံး၊ အကောင်းဆုံးလို့ လက်ခံထားတဲ့သူ မဟုတ်ဘူး။
((ကိုမျက်လုံး ဆီကနေ ကူးလာတာပါ))
Filed under Copy, Paste |	2 Comments
Posted on February 6, 2008 by cuttiepinkgold
မြန်မာ ဘလောက်ဂါ တွေ ဖြစ်သန်းခဲ့ရတဲ့ ဘ၀အတွေ့အကြုံတွေ ကို အခြေခံပြီး ရေးဖွဲ့ထားတဲ့ အေးအေးလေး သီချင်းတွေ အများစုပါဝင်ပါတယ်…။ တေးရေးတွေ ကတော့ ကိုမျက်လုံး၊ မင်းယွန်းသစ်၊ ကိုဂေါက်၊ မောင်ခ အော် ရေးရင်းနဲ့ old blog band က လူအကုန် ကုန်ပြီ။ အော် ဘလောက်ဂါတွေ တွေကြုံခဲ့ရတဲ့ အဓိက အဖြစ်အပျက် တွေကို သီချင်း အအေး တွေနဲ့ ဖွင့်ချထားပါတယ်..။ ဘလောက်ဂါတွေလဲ ဒီပို့စ်ကို ၀ိုင်း ကြော်ငြာပေးကြ အုံးနော်..။ စပွန်ဆာက mbs ပါ။ နားထောင်ကြည့်လိုက်ပါ။ တခုခု တော့ ကိုယ်ဘ၀ တစ်ပိုင်းတစ်စ နဲ့ သွားပြီးတိုက်ဆိုင် ချင် တိုက်ဆိုက်နေပါလိမ့်မယ်.။ အောက်မှာ ဘလောက်မှာဖော်ပြဖို့ linkရေးပေးထားတယ်..။ ယူသွားပြီး ဘလောက်မှာ ကြော်ငြာပေးနော်…။
(img alt=”funny” src=”http://artofkha.files.wordpress.com/2008/02/funny-news01.jpg&#8221; /)
လက်သဲကွင်းများ နေရာတွင် ” တို့အစားထိုးရန်
(ဤပို့စ်ကို ကိုခ ဘလော့ဂ်မှ ပြန်လည် ကူးယူဖော်ပြပါသည်။)